> Resource > Lugood > Sida loo soo dejinta Lugood Library in Winamp
Ma doonaysaa in ay beddelaan ka Lugood in Winamp la telefoonka ah Android aan maktabadda Lugood aad ku waayi? Haddaba nooca ugu dambeeya ee Winamp, waxaad si fudud u dajiyaan kartaa maktabadda Lugood iyo playlists, oo hagaagsan oo phone Android la Winamp app for Android. Eeg tallaabooyinka hoos ku faahfaahsan.
Winamp Rakibaadda Fresh
Talaabada 1: Download nooca ugu dambeeya ee Media Winamp ka Player , iyo rakibi daqiiqadii. Ogsoonow in Version 5.6 ama ka dib waxaa looga baahan yahay in ay u hagaagsan wireless Winamp u Android.
Talaabada 2: Orod Winamp oo aad la keeneen in doonaa inay dajiyaan maktabadda Lugood si aad u Winamp. Dooro " Import ka Lugood "in ay dajiyaan oo dhan of music Lugood raadkaagu galay Winamp Media Maktabadda.
Haddii aad horay u rakibay Winamp ku saabsan habka, waxaad u baahan tahay waxa ay gacanta ku sameeyo adigoo gujinaya " Library "ee geeska bidix hoose ee ciyaaryahanka iyo dooro" Import Lugood Media Library ".
Maktabadda Lugood Keliya kuma filna. Waxaad u baahan in ay soo dhoofsadaan aad Playlists Lugood , sidoo kale. In sidaa la yeelo, guji "Library" ee geeska hoose ee bidixda iyo dooro "Import Lugood playlist". Sidaa darteed, waxaad ka heli wax kasta oo Winamp la mid ah Lugood, iyo dhoolacadeynta xawaaraha iyo muuqaalada ka badan Winamp.
Haddii aad rabto in aad u hagaagsan aad Winamp maktabad warbaahin si Winamp qalabka maktabadda, isticmaal uun xiriir USB ama network Wi-Fi. Anna waxaan dooran doonaa Wi-Fi sababtoo ah waa u fudud in ay u hagaagsan maktabadda warbaahinta Winamp dhexeeya computer iyo telefoonka wirelessly. Waa talaabooyin fudud: marka hore loo soo dajiyo Winamp u Android oo awood u hagaagsan wireless in Menu / Settings; markaas xubnuhu qalab aad la computer; in Winamp socda, mouse ka badan icon qalabka iyo riix " nidaameed "button.
Ma kaabta Lugood Xiriirada?